Sijonga zonke iinguqulelo zedessert enegama | Iindaba zeGajethi
UGoogle usandula ukubhengeza ukuba igama lokugqibela le-Android liya kuba ngu-Q: i-Android 10. Ewe, ufunda elo lungelo, uGoogle ubonakala ngathi udiniwe kukukhangela amagama eedessert ukubhaptiza iinguqulelo ezintsha ze-Android eziqala minyaka le kunye nokufika kwenguqu yeshumi, ithathele ingqalelo ukuba ibingumzuzu ofanelekileyo.
I-Quiche, iQuaker Oats, iQuindim, iQuinoa ... ngamanye amagama awayeqwalaselwe njengamagama anokwenzeka kuhlobo olulandelayo lwe-Android. UGoogle ubanga ukuba isizathu solu tshintsho kungenxa yokuba bafuna ukwenza ukuba uphawu lubandakanye kwaye lufikeleleke ngokusemandleni, ngaphandle kwento yokuba unyaka nonyaka, Ukufumana igama lenguqulelo ye-Android kwakumnandi kakhulu.
Kananjalo, abafana kuGoogle basebenzise ithuba lentengiso ukuya tshintsha ilogo yemveli ehamba ne-Android Ngokwenyani ukusuka ekuqaleni kwaye apho sinokubona khona intloko ka-Andy ekupheleni kwegama. Ngoku, ummeli we-Android oyirobhothi ubeka intloko yakhe phezulu kwigama, oko kukuthi, ukugcina ithoni efanayo yombala, kodwa hayi itypography ngoku ethe kratya kwisitayile.
Le logo entsha iya kuqala ukusetyenziswa rhoqo kwiiveki ezimbalwa ezizayo, mhlawumbi xa kugqitywa ingxelo yokugqibela ye-Android 10, Inguqulelo engathathi xesha lide ukwazisa ngokusesikweni kwimarike, kwaye ibikwi-beta ukusukela ngoMatshi odlulileyo.
NgokukaGoogle kwinqaku apho ibhengeze olu tshintsho, ezinye iileta ezinje ngo-L no-R azifani kwezinye iilwimi ukongeza ekubeni Kunzima kakhulu ukufumana igama unyaka nonyaka. Ukongeza, kuya kusiba nzima kubasebenzisi abangaqhelananga nesigama esisetyenzisiweyo ukwazi ukuba isiphelo sakho sisebenzisa ingxelo yokugqibela ekhoyo.
1 I-Android 1.6 IDonut
2 I-Android 2.1 Eclair
3 I-Android 2.2 Froyo
4 I-Android 2.3 Isonka sejinja
5 I-Android 3.0 Inyosi yobusi
6 I-Android 4.0 Ice Cream Sandwich
7 I-Android 4.1 Jelly Bean
8 I-Android 4.4 KitKat
9 I-Android 5 Lollipop
10 I-Android 6 Marshmallow
12 I-Android 8 Oreo
13 I-Android 9 Pie
I-Android 1.6 IDonut
I-Android 1.6 yenye yeenguqulelo zokuqala ezizinzileyo ze-Android kunye nokubeka ukufikelela kwifayile ye- ibhokisi yokukhangela kuGoogle kude kube namhlanje ukuba yenye yeempawu ezisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi beli qonga. Le nguqulo yayivuliwe kwiifomathi ezintsha zesikrini kunye neefom ukongeza ekumiliseleni ivenkile yentengiso ye-Android Market, ngoku eyaziwa njengeVenkile yokudlala.
I-Android 2.1 Eclair
I-Android 2.1 i-Eclair yamkele imiboniso yezisombululo eziphezulu ukongeza iimvelaphi ezinobomi eziphendulayo xa unxibelelana nazo. Enye into enoveli yayikukusebenzisa iitheminali ezilawulwa yile nkqubo yokusebenza njenge-GPS enkosi kwimephu zikaGoogle. Ikwasivumele ukuba sifumane ulwazi lwezithuthi ngexesha lokwenyani kunye nokuba kunokwenzeka ukubuyisela ikhibhodi ngemakrofoni ukuyalela ukuba sifuna ukubhala ntoni.
El lawulo lwezwi iqale ukuba yinto eqhelekileyo kwiinguqulelo nge-Android 2.2 Froyo. Ithuba lokukwazi ukwabelana ngokudibanisa idatha kunye nezinye iitheminali okanye izixhobo kunye nokuphuculwa kokusebenza okukhulu yenye yeendlela ezintsha ezize nale nguqulo ye-Android.
I-Android 2.3 ijolise ekuphuculeni ukusebenza kwezixhobo kwimidlalo, ivumela abaphuhlisi ukuba benze imidlalo ye-3D, ukongeza ekukhuleni okukhulu kobomi bebhetri (enkosi kwiphaneli yolawulo lwezixhobo esivumele ukuba siqwalasele usetyenziso olugqibe kakhulu) Y yongeza inkxaso yeetshiphusi ze-NFCNangona ibingajoliswanga ekuqaleni ekwenzeni iintlawulo eziselfowuni njengoko kunjalo nanamhlanje.
Nge-Android 3.0 ye-Android yaqala ukufikelela kwiipilisi Ngoguqulelo lwayo olwenza uninzi lweyona ndawo inkulu yafumaneka kwiscreen sasekhaya. Nangona kunjalo, njengoko sibonile ukuvela kwe-Android, kubonakala ngathi intengiso yeetafile ayisiyonto yokunikezela ngezixhobo kuGoogle.
Le nguqulo ibandakanyiwe kwiscreen amaqhosha okuhamba, evumela abavelisi ukuba baqale ukongeza amaqhosha omzimba kwizitishi zabo, into abayeke ukuyenza kancinci. Useto olukhawulezayo apho sinokujonga khona ibhetri, imeko yoqhagamshelo kunye nexesha ukuba zibekwe kwindawo enye.
Ice Cream yayiyinguqulo ye-Android egxile kuyo ukwenza ngokwezifiso ngumsebenzisi, kuba isivumele ukuba senze ngokwezifiso iscreen sasekhaya, yongeza iindlela ezimfutshane zesicelo kwaye sabelane ngomxholo kwangoko kunye nendlela esifuna ngayo. Ikwazise ukuba nokwenzeka kokulawula ukusetyenziswa kwedatha kwezicelo ezifuna unxibelelwano lwe-Intanethi.
Enkosi kwi-chip ye-NFC, into eyaziswa kwi-Android Gingerbread, yazalwa I-Android Beam, inkqubo yotshintshiselwano yomxholo eyayisetyenzisileyo ukusebenzisa obu buchwephesha, kwaye yayiyinto elungileyo ukwabelana ngeevidiyo, usetyenziso, imidlalo, umculo ...
UGoogle ngoku wenza ukubonakala kwakhe ngokusungulwa kweJelly Bean, esiba ngumncedisi oshukumayo esasikade simfuna. Enye into enoveli kukuba sebenzisana nezaziso kwaye usebenzise iiakhawunti ezininzi zomsebenzisi kwisixhobo esinye.
"Ok Google" ize ne-Android 4.4 KikKat, umsebenzi osivumeleyo ukuba siqalise ukukhangela kwi-intanethi, senze umnxeba, sidlale ingoma, sithumele umyalezo obhaliweyo ... Uyilo lufumene notshintsho olubalulekileyo, kuba xa sasibukela umxholo, imigoqo yokuhambisa inqanawa ifihliwe ukuze thina singagxila kwinto ebesifuna ukuyibona.
I-Android 5 Lollipop
I-Lollipop yafika kunye ne utshintsho olukhulu kuyilo kwi-Android, ukwamkela material Design ethi namhlanje ibaluleke kakhulu kuyilo lweyona ecosystem isetyenziswayo ehlabathini. Ukongeza, ikwandise ukusebenziseka kwayo kwaye yaqala ukufikelela kuzo zombini iithelevishini kunye neemoto kunye neewatchwatches.
I-Android 6 Marshmallow
IGoogle ngoku yaba yinto enomdla ngakumbi kuba bekunganyanzelekanga ukuba iyeke ukusebenzisa usetyenziso ebesilusebenzisa ukuze sikwazi ukubuza imibuzo yethu. Nge-Android Marshmallow, uGoogle usivumele misela ukuba yeyiphi na imvume esifuna ukuyinika izicelo esizifakileyo, ukuvumela ukuba sizenze zingasebenzi ezo zingenangqondo ngohlobo lomdlalo okanye usetyenziso. Enye into entsha yinkqubo entsha yokusebenzisa ibhetri, inkqubo ekrelekrele eyenze ukuba isixhobo sethu sigcine ibhetri xa siyifuna ngokwenene.
Enye yezinto ezintsha ezinqabileyo ezivela kwisandla se-Android 7 yayikukukwazi ukwenza izinto ezininzi, zisivumela vula iiapps ezimbini ngaxeshanye kwiscreen, ukuze sikwazi ukubukela imovie ngelixa siphendula ii-imeyile, imiyalezo ... Enkosi ngeVulkan API, imidlalo ifikelele kwelinye inqanaba kwaye ivumela abaphuhlisi ukuba babonelele ngemizobo ebukhali kunye nokubandakanya iziphumo ezinomtsalane.
Ukusetyenziswa kwenyani ebonakalayo, ngokusebenzisa iiglasi apho uyibeka khona ifowuni, yenza ukubonakala kwayo ngokusungulwa kwe-Android 7 Nougat. Ezinye izinto ezinqabileyo zifunyenwe kwi-rsponder ngqo kwizaziso, ukubeka ngokwamaqela kwezi zinto, ukubanakho kokulungiselela ukubonakala kunye nokukhethwa kweeSeto eziKhawulezayo kunye nomsebenzi wokuGcina idatha, othintele usetyenziso ngasemva ekusebenziseni uqhagamshelo lwe-Intanethi ukuvuselela.
I-Android 8 Oreo
Nge-Android 8 Oreo ixesha lokuqalisa lesiphelo xa siyivula lalicwangcisiwe ngesiqingatha, yazisa ukugcwalisa okuzenzekelayo kumaphepha okungena kwaye isinike ukhetho olwahlukileyo xa sikhetha isicatshulwa kwiscreen. Olunye uvelwano lwabasebenzisi abaninzi oluqhwatyelwe izandla ngumsebenzi wePiP, uMfanekiso-kuMfanekiso, osivumela ukuba sibonise ividiyo kwiscreen sokudada ngelixa sisebenzisa ezinye usetyenziso.
I-Android 9 Pie
Le ibiyi Inguqulelo yamva nje ye-Android eyamkele igama lesiqulatho sedizethi ukuba libizwe. Ukuphuculwa kokuzimela, kwakhona, yayiyenye yezona zinto zintsha zivela esandleni se-Android Pie ukusukela enkosi kubukrelekrele bokuzenzela, inkqubo yokusebenza yayikhawuleza kakhulu phambi kwezenzo zethu.
La ukuhamba ngomzimba Yaba yinguqulelo yokuvumela abavelisi ukuba babonelele ngobukhulu bescreen ngokususa ibar yokuhambisa esezantsi. Enye into enqabileyo ifumaneka kwiphaneli yokulawula eyasivumela ukuba sazi ngalo lonke ixesha ukuba sisetyenziselwa ntoni isiphelo sethu, apho ixesha esilichitha kwisicelo ngasinye liboniswa kwaye lisivumela ukuba sibeke ii-alam ukuba siyaligqitha ixesha lokusetyenziswa ngaphambili besimisile.
Enye yeendaba ezinomdla kakhulu eziza kuthi zivela kwisandla se-Android 10, kwaye ukuba igama leedessert, yi imo yasebusuku, imowudi etshintsha ngokuzenzekelayo, okanye ngesandla ukuba siyisekile, ujongano lomsebenzisi kunye nolwezicelo, ukubonisa umbala omnyama ngokupheleleyo okanye omnyama grey (kuxhomekeke kwisicelo).
Imowudi yedesktop yenye yezinto ezinqabileyo esizifumana kwi-Android 10, kwaye iyasivumela qhagamshela i-smartphone yethu ekubekeni iliso kwaye siyisebenzise njengoko sisenza ngoku ngePC. Ukurekhoda isikrini, enye yeyona misebenzi ilindelweyo luluntu, yenye yezona zinto zintsha zolu hlobo, kuba ayizukufuna usetyenziso lomntu wesithathu.
Ukuphucula ubungasese ngokunciphisa ukufikelela kunye nokusetyenziswa okwenziwe kwezinye iinkqubo ngasemva, ulawulo olungcono lwabazali kunye neempendulo esizibhala kwisaziso ngokwaso, kunye nokuba nokwenzeka yabelana ngamagama okugqitha kwiinethiwekhi zeWi-Fi usebenzisa iikhowudi zeQR Ezinye iindaba ezinomdla ezivela kwisandla se-Android 10.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Android Q iya kubizwa ngokuba yi-Android 10 isivalelisa kwiidessert: sijonga onke amagama eelekese ozisebenzisileyo
Ndiyayithanda i-Android 10 kwaye ndinayo i-12, intle kakhulu. Ngaphandle koko, ndikhankanya ukuba ndisanda kuphanda iTutuApp apk kwaye ndingatsho ukuba lusetyenziso oluhle. Inyani kukukhuphela kwi-https: // android ekhaya. com / tutuapp / kwaye ndiyithandile kwaye yasebenza.
Ndiyakuxelela ukuba ndisandula ukuphanda i-YOWhatsApp kwaye ndingatsho ukuba yinto elungileyo yokusebenza. Inyani yeyoba ndiyikhuphile ndayithanda yasebenza. Ndiyifumene kwikhaya le-android
Ungamfumana njani umntu okwi-intanethi?